तपाइँको मेनूलाई LXDE मा अनुकूलन गर्नुहोस् र LXMEd को साथ Xfce लिनक्सबाट
तपाईको मेनूलाई LXDE मा अनुकूलित गर्नुहोस् र LXMEd को साथ Xfce पनि गर्नुहोस्
हामीले प्रयोग गरेका छौं (वा प्रयोग) सँग कुनै वितरण LXDE, हामीलाई थाहा छ कि मेनु सम्पादन गर्नका लागि, हामीले मैन्युअल रूपले फाइलहरू भित्र "छुनु" पर्छ / usr / सेयर / अनुप्रयोग / यसमा वस्तुहरू हटाउन वा थप्न।
ठिक छ, तपाईंको प्रार्थनाको उत्तर दिइयो। त्यहाँ एक अनुप्रयोग भनिन्छ LXMEd (उर्फ LXMenuEditor) मा लेखिएको Java यसले यस कार्यलाई सजिलो बनाउँदछ LXDE र यो पनि संग काम गर्दछ Xfce y जिनोम.
लेखकको वेबसाइटका अनुसार, LXMEd हाल कुनै समस्या बिना काम गर्दछ र परीक्षण गरिएको छ, भित्र Lubuntu, लिनक्स मिन्ट, सुसे y आर्च लिनक्स। तपाईं यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ यो लिङ्क। यसको ईन्टरफेस धेरै सरल छ र निकटसँग मिल्दो छ अलाकार्ट, मेनू सम्पादक जिनोम.
लेखको पूर्ण मार्ग: लिनक्सबाट » aPLICACIONES » तपाईको मेनूलाई LXDE मा अनुकूलित गर्नुहोस् र LXMEd को साथ Xfce पनि गर्नुहोस्
आर्चमा डाउनलोड र परीक्षण गर्दै र Adeskbar डकमा मेनुको रूपमा
कुन वितरणमा तपाईंले LXDE @elav प्रयास गर्नुभयो, तपाईं मलाई यसको संचालन र प्रदर्शनको बारेमा राय दिन सक्नुहुन्छ?
मैले यसलाई डेबियन र उबुन्टुमा परीक्षण गरेको छु। पहिलो मा यो दोस्रो than भन्दा राम्रो काम गर्दछ
GNome, केडीई र Xfce को तुलनामा डेस्कटपमा LXDE केही छोटो हुन्छ, तर यसले आफ्नो कार्य धेरै राम्रोसँग गर्छ र धेरै हल्का छ। सबै भन्दा राम्रो तरिका तपाईं यसको प्रयोगको कदर गर्न सक्नुहुन्छ अनुभव आफैले अनुभव गर्नु हो
तपाईंको उत्तरको लागि धन्यवाद, मसँग यसलाई प्रयास गर्ने समय छ, म डेबियन आईसो डाउनलोड गर्छु र स्थापना गर्नेछु, त्यसपछि म परिणाममा टिप्पणी गर्नेछु।
नमस्कार, म जान्न चाहन्छु कि म opensuse मा कसरी स्थापना गर्दछु।
होम्सलाई जवाफ दिनुहोस्
मलाई लाग्छ कि उस्तै जस्तो यो सबै अन्यमा स्थापित छ। जब तपाईं फाईल डाउनलोड गर्नुहुन्छ र अनजिप गर्नुहुन्छ, त्यहाँ स्क्रिप्ट छ जुन रुटको रूपमा चलाउनुपर्नेछ। के तपाईंले त्यो पहिले नै गर्नुभयो?
हेलो मैले पहिले नै स्थापित गरेको छु, जानकारी को अनुसरण गर्नुहोस्!
रमाईलो गर्नुहोस् !! 😀
धन्यवाद elav <° लिनक्स।
त्यो "vlw fwi" को साथमा मैले केहि मिनेट सोच्दै थिएँ, मैले गुगल जाजाजालाई सोध्नु पर्छ जब सम्म !!!!
आज मैले केहि नयाँ सिकें 😉
नमस्कार, KZKG ^ Gaara… vlw fwi, पोर्तुगालीमा यो «valeu go» (धन्यवाद म जाँदैछु)। ठीक छ, तपाईले LXMEd मा याद गर्नु भएको कुरा भनेको मेरो मेनुमा केहि चीजहरू छन् जुन LXMEd मा छैनन्।
हो, मैले पढें कि यो पोर्चुगिज भाषाको एक वाक्यांश हो जुन ब्राजिलमा धेरै प्रयोग भएको थियो, यसको मतलब "धन्यवाद" भनेको मैले पढेको जस्तै हो, मलाई हाहको शंका लाग्न मन पर्दैन।
अभिवादन र धन्यवाद द्वारा तपाईंलाई रोक र टिप्पणी गरीएकोमा।
त्यो एप्लिकेसन हो जुन मैले ago महिना भन्दा पहिले लुबन्टु स्थापना गरेको थिएँ, यो फिचरमा थोरै छोटो देखिन्छ, तर यसले के मद्दत गर्दछ?
मँ स्पष्ट पार्छु कि यो पूर्वनिर्धारित द्वारा स्थापित छैन।
फाईल वा निर्देशिकाहरू Meld को साथ तुलना गर्नुहोस्
उबुन्टु र एचपी मूनशट परियोजनामा ​​एक भएका छन्